အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ၁ ... ၂ ... ... ၃၄ !
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:52 PM
အကိုရေ ဒီနှစ်တော့ အရမ်းထူးခြားတဲ့ မွေးနေ့လေးပါ
အကို မွန်တို့နဲ့အတူ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်...........
သူငယ်ချင်း မင်းရဲ့ စာသားထဲကအတိုင်း ကိုကြီးစိုးလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြည့်စုံနေစေဖို့ ဆုတောင်းသွားတယ်ကွာ။
တက်လည်းတက်နိုင်တယ် မွေးနေ့ ပို့ စ့်တင်ထားပေးမှန်းအောက်ဆုံးအစိမ်းရောင်နဲ့စာသားကိုဖတ်မှသိတော့တယ်ဗျာ တော်တယ် တော်တယ်း) ။ Happy Birthday ကိုစိုးထက်ကြီး ဘေးဘရာ အပေါင်း ခ၀န်းညောင်း၍ ဘလော့တစ်ကာ လည်နိုင်ပါစေ ဟီးး ။
ko black dream ရေအရမ်းကိုကောင်းတဲ့ပို့(စ်)လေးပဲ....မွေးနေ့ ပို့ စ့် လေးကိုရေးပေးတတ်တဲ့စိတ်ကူးလေးလဲအရမ်းကောင်းတယ်... ကိုစိုးထက်အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးတယ်... ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေ...
ကိုစိုးထက် ဘလော့မှာ ကွန်မန့်ရေးလို့ မရတဲ့အတွက် ဒီကပဲ လာဆုတောင်းသွားပါတယ်။
အကိုကြီးရေ မွေးနေ့မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ အရိုးအသား ဂျင်ဂျင်မာပြီး ကြင်ရာနဲ့အချစ်ပွားလို့ တစ်နှစ် နှစ်သား ကျပါစေ:P :P :P နောက်တာပါစိတ်ဆိုးနဲ့
မိသားစုနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရီးလမ်းကို အခက်အခဲ အနဲဆုံးနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ ။
ကိုစိုးထက် မွေးနေ့မှာ လိုအင်ဆန္ဒများ တလုံးတဝတည်း ပြည့်စုံနိုင်ပါစေဗျာ..။
May you haveapeaceful life together with your beloved family. As you are wonderful human being, I'm sure you and your family life will be fill up with happiness andalots of success.
Let you know that I'm so glad to know you through from Blogging. Proud to haveanice friend who have good sense of humor. :)))
Haveawonderful day. Enjoy your special day!!
Please take your Birthday Present here .
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်အောင် ချစ်သောမိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်နိုင်ပါစေ ကစိုးထက် ရေ။
Happy Birthday Ko Soe Htet!
HAPPY BIRTHDAY KO SOE HTAT!!!!!!
MAY YOU BE PEACEFUL LIFE WITH UR BELOVED FAMILY.
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်အောင် ချစ်သောမိသားစုနှင့်အတူ အေးချမ်းပျော်ရွှင် အောင်မြင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ။
ညီလေး ဘလက်ခ် ရေ.. ပြောင်မြောက်တဲ့ မွေးနေ့ဘွဲ့ညွန်း စာစုအတွက် ညီ့ကို ကိုစိုးထက်ကြီး ကျေးဇူး အရမ်း တင်နေမှာပါ..
အစ်ကိုကြီးရေ..ပျော်ရွင်ဖွယ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင် ချစ်သောမိသားစုနဲ့ အတူ တိုင်းပြည်အကျိုး အသေအချာ သယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ အလေးအနက် ဆုတောင်း ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို အဖျက်ကင်းကင်းလုပ်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
"နောက်ကျောဓါးထိုးခံရလို့ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တိုင်း သိပ်ရင်းနှီးတဲ့မျက်နှာတွေ့မယ် ငါမအံ့သြဘူး" လို့ ရေးခဲ့ပေမယ့် ကျနော်အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ ကိုစိုးထက်ဆီကနေ အများကြီး အတုယူရဦးမယ်
စိတ်ကောင်းရှိပြီး ကူညီတတ်လို့ လူချစ်လူခင်ပေါသလိုပဲ နောင်လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေမြဲပြေပါစေ။
လုပ်စရာ ရှိတာတွေကိုသာ ဆက်လုပ်ပါ...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှ သည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် ဒေါက်ထက်ချစ်သော မိသားစုနှင့်အတူ အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်...။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပြီး နောက်ရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာ မှာ ပို၍ပို၍ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ.. အစ်ကိုစိုးထက်
နာမည် မပါသွားဘူး... ဟီး နှစ်ခါ ဆုတောင်းဖြစ်တာပေါ့
ပို၍ပို၍ ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်ကို စိုးထက်
သူပြောသလိုပဲနော် ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုစိုးထက်
လာတာနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ ကိုစိုးထက်ကြီးယခုမွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကိုစိုးထက်ရေ။ အခုမွေးနေ့ကစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မိသားစုနဲ့ အတူတကွ ပျော်စရာမွေးနေ့များစွာကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
blackdream ရေ ရေးတတ်ပုံကတော့ မွေးနေ့ပို့စ်ကိုတောင် ဖတ်တဲ့သူ ငေးသွားအောင် ရေးတတ်ပါပေတယ်း)
Happy birthday ပါ ကိုကြီးစိုးထက်ရေ။ကိုကြီးချစ်တဲ့မိသား
HAPPY BELATED PAR KO SOE HTET :)
I REALLY LIKE THIS POST. UTTERLY BEAUTIFUL AND POETIC EXPRESSIONS.
YOU R THE LEGEND IN DELICACY. (a yann mite tal)
Normally, I don't care about people's birthday but I have to say something for my big big brother, Ko Soe Htet. I found you asanon-stop automatic smile emitting machine. only people with very healthy and good hearts could do it and, you are surely one of them, bro. Keep your dreams come true whatever people talking about you.
By the way, nice birthday present from Mr.Black dream.
လူသားတစ်ယောက်အတွက် ဒီလောကတွင် အနွေးထွေးနိုင်ဆုံးသော
နေရာသည် “ မိသားစု” ဆိုသော နေရာတစ်ခုသာရှိသည်ကို
သူ့လို ထိုစကား လုံးနှင့် အဝေးဆုံးတွင် ရောက်ရှိနေသောသူများသာ
ခိုက်သွားပြီ သူငယ်ချင်းရေ .. .. ကောင်းတယ် .. ... (..: Ag :..)